Mivavaka amin'i Maria dia tsy araka ny Baiboly | Apg29
Ny Eglizy Katolika malalaka dia malalaka eo amin'ny isam-ponina Maria ka noho izany dia lavitra koa ny zavatra lazain'ny Baiboly momba azy.
Papa mamelatra ditin-kazo manitra eo anoloan'ny sarivongan'i Maria sy i Jesoa zazakely.
Ao amin'ny fampianaran'ny apostoly sy ny Testamenta Vaovao dia tsy avy amin'ny fampianarana izay mandroso manodidina Maria, dia afaka hanendry azy ireo ho tsy araka ny Baiboly.
Izany fotopampianarana manana ny fakany amin'ny mpanompo sampy koa ny an'ny mpanjakavavin'ny lanitra
Noho izany, dia nahazo ny antoka ny zavatra resahin'ny fotopampianarana ary tokony haseho mazava tsara. Misy tantara amin'ny alalan'ny fanompoam-pivavahana eo amin'ny kolontsaina samy hafa sy ny asan'ny maizina ny "mpanjakavavin'ny lanitra". Niverina faran'ny azo zohina indray vadin'i Nimroda, Semiramis. Ny fananana nitondra ny zanany Tamoza, dia niantso ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra sy ny godmother. (1 Nom. 10: 8-9).
Fotsiny ny anarana hoe "mpanjakavavin'ny lanitra" dia ny Eglizy Katolika, anarana nomena an'i Maria. Rehefa avy eo dia jereo izany rehetra izany sarivongan'i Maria sy ny zaza, Dia toy izany ny endriky ny vadin'i Nimroda sy ny zanaky ny dika mitovy aminy.
Ny hevitra ny gudamodern ny ankizy niaina teto an-tany samy hafa kolontsaina. NY FIVAVAHANA famindram ho an'ny Fiangonana Katolika mino mpahay siansa sasany nidina avy tany tamin'ny taonjato 300, ary dia teraka tany Egypta izay nivavaka sy ny zanany Isis Horus. Ny mitovy no manaitra. Jereo ny sary.
Ao amin'ny The New Rakipahalalana Britannica, dia afaka handray ny zava-misy manaraka ireto: "fankamasinana ny renin'i Andriamanitra, rehefa nahazo tosika ny Fiangonana Kristianina lasa [romanina] fanjakana fiangonana eo ambany Constantin sy ny hafa firenena eo amin'ny vahoaka mivantana tao am-piangonana. ... Ny fivavahana sy ny fahatsiarovan-tena ara-pivavahana nanana ny an'arivony taona maro no namolavola ny fivavahana ny 'Reny Lehibe' sy 'virjiny andriamanitra ", izay nitondra ny fampandrosoana ny tonta niandohan'ny fivavahana tsotra Babylonia sy Asyria."
Eto, hitantsika izay fivavahana izany ny andriamanibavy reny taranak'i fivavahana mpanompo sampy, izay tsy ny tenin 'Andriamanitra, fa avy amin'ny fanompoan-tsampy. Ihany no zava-misy izany dia tokony ho ny maso-fanokafam, ary izay hiafara amin'ny ny fitsaohana Maria,
Ny Katesizin'ny Katolika milaza fa i Maria ambonin'izy rehetra, fa ny Baiboly milaza fa i Jesosy: "Izy ireo koa ny razana, sady avy taminy Kristy efa tonga tahaka ny olombelona, ​​Izay ambonin'izy rehetra, Andriamanitra isaorana mandrakizay. Amen. "Roma. 9 ny 5.
Miteraka ny zava-drehetra ve isika Katesizy momba Maria, dia tsy maintsy hampiasa toerana lehibe ho azy. Mety hatao tsy misy fa tianay hahita fanohanana ny filazana ao amin'ny Baiboly, dia tsy handray am-po izany. Mila fa tsy ho amin'ny antso ao amin'ny 1 Korintianina. 4: 6 "Fa mba hianatra ny fitsipika rehefa isika tsy handeha mihoatra noho izay hoy ny Soratra Masina."
Raha mandeha any New Testamenta nampianatra tsy ny rehetra no mahita iray voalaza fa Maria. Tsy nahita na oviana na fotoana fa nampianatra ny apostoly no Mary Eglizy Katolika. Koa isika mandà ireo fampianarana ireo satria izy ireo dia tsy miorina amin'ny Soratra Masina.
Ny fampianarana dia tsy amin'ny taonjato voalohany. Izany raha tsy aorian'ny taonjato vitsivitsy rehefa manomboka mipoitra, ny Filan-kevitra Nicée tamin'ny 325, dia tany Efesosy no manova ireo olona 431 Maria Renin'Andriamanitra 'Andriamanitra. Avy eo dia mahazo anarana samy hafa förebedjerska, mitohy virjiny, tsy nisy ota, nådeförmedlerska sy ny mpiara-redeemers.
Ny Eglizy Katolika no tena ela eo amin'ny isam-ponina Maria ka noho izany dia lavitra koa ny zavatra lazain'ny Baiboly momba azy. Ao amin'ny paragrafy 969 ny Katesizy Katolika manao hoe: "Ity fiterahana Maria eo amin'ny raharaham-pahasoavana nanomboka tamin'ny fankatoavana amim-pinoana dia nanome tamin'ny Filazana, ary azo antoka fa izay izy mipetaka amin'ny hazo fijaliana. Rehefa niakatra tany an-danitra izy, dia tsy namela ny fanavotana asa fitoriana. Ho foana tsy misy fahatapahana mandra-pahatongan'izany rehetra nasongadina nahatanterahany ho mandrakizay. Amin'ny alalan'ny fanelanelanana ny haben'ny izy mahafoana antsika ny fanomezam-pahasoavana ho famonjena mandrakizay .... Koa ny Virjiny sambatra no hampiharina ho Advocate, Artemisy, manampy ny tatatra sy mampita tatatra. "
Izany no lazaina fa i Maria "ny fanavotana asa fitoriana." Izany dia i Jesosy ihany no Jesosy, izay efa natao ny famonjena asa fitoriana. Izao no voalaza Katolika fa i Maria koa izany. Izany dia add-eo izay lazain'ny Tenin'Andriamanitra.
Ampitahao izany amin'ny mazava ny hafatra: "Ary tsy misy famonjena, ary ny lanitra tsy misy anarana hafa fa olona amin'ny alalan'ny izay hahazoantsika famonjena." Asan'ny Apostoly. 4:12
Hevitra toy izany dia afaka ny ho tsara ny soratra masina mihoatra noho izay hoe rehefa milaza hoe: "Ary noho izany hampiharina ny Virjiny sambatra" i Jesoa dia nampianatra antsika ny fomba fivavaka: "Ary na inona na inona angatahinareo amin'ny anarako dia hataoko, fa ny Ray hankalazana eo amin'ny Zanaka. "John. 14:13. Izany dia taorian'ny toromarik'i Jesosy, fa tsy ny Eglizy Katolika ny katesizy, izay tsy maintsy manaraka rehefa mivavaka.
Mary teraka tsy manam-pahotana ihany koa ny fanampin izay natao tao amin'ny Fiangonana Katolika, ny Baiboly milaza fa efa nanota ny olona rehetra (Rom. 3:23). Izany no voalaza ho toy ny foto-pinoana vao haingana taona 1854th
Na izany aza taty aoriana, natao ny fiangonana fa Maria nakarina any an-danitra, vatana sy fanahy, tonga tamin'ny 1950 ny Fetin'ny maty Andron'ny avy eo nitondra ny Papa Pie XII, ny fampianaran'ny Eglizy Katolika momba ny fieken-keloka Maria any an-danitra. Tsy noforonina ny fanekem-pinoana manaraka an'i Maria: "Virgin mahatohitra, satria vitako ny fiainany teto an-tany Mazava ho azy fa vatana sy fanahy any an-danitra niditra tao amin'ny voninahiny."
Manana ny antontan-taratasy izay maneho ny Papa ny fitoriana tamin'ny 1950, ary io no tena Mariho fa ny Fanampiny nanao mivantana rehefa afaka izany fampianarana vaovao naorina ho toy ny fitambaram-pampianarana katôlika nilaza izao manaraka izao momba ny olona, ​​"an-tsitrapo no sahy handà na ahiahy fa efa voafaritra, ny nilaza izy fa nianjera tanteraka sy tsy hahazo ilay finoana katolika. "
Eny, misy loza mitatao izany gaga sy fanazavana ny Fanahin 'ny Papa eto no nanorina izany rehefa afaka izany, fampianarana, no dia lavo avy eo ary tsy hahazo ilay finoana katolika. Voalohany indrindra, tsy misy avy amin'Andriamanitra ny finoana, dia tsy ho hita eo ny tenin 'Andriamanitra, toy izany koa izany fa ny mifanohitra amin'izany, fa Izaho efa latsaka tsy hahazo ilay seza fiandrianana raha Manamafy izany fotopampianarana, ny lalàna tamin'ny 1950. Izy no hanao latsaka avy amin'ny ny finoana katolika fa tsy tokony ho resahina ho toy ny famantarana ara-pahasalamana tsy ho nandika, tsy misy foto-pampianarana tsy araka ny Baiboly absconds, izay antsoin'ny Baiboly hoe antsika hanao.
Fa ny Katolika no mametraka ny fitokisany amin'ity Fiangonana ity dia tsy maintsy ao ho sarotra amin'ny fandrahonana ireo tsy manaiky izany fianarana olombelona. Angamba mahatonga anao manahy ny hino izany sy ny itoerako amin'ny 'ity fiangonana ity, dia tsara izany papa nandray ny fanambarana mba hamatotra ny olona bebe kokoa ho any am-piangonana sy tsy araka ny Baiboly io fampianarana.
Katolika ve ianao, fiatoana izany, mangataka famelan-keloka sy hiaina ny filazantsara sy ny tiany indrindra sy ny fahalalahana ara-pahasalamana fanafahana ao amin'i Jesosy Kristy.
Vavaka an'i Maria dia tsy araka ny Baiboly
Mary ny foibe ao amin'ny Fiangonana katôlika dia tena marina ary ny tena ratsy indrindra dia ny hoe zavatra manamaizina izany Jesosy, Ilay Zanak 'Andriamanitra, Mpamonjy izao tontolo izao. Izany dia tokony ho 400 taona taorian'ny Fiangonana Kristianina dia nanomboka tamin'ny Pentekosta fa Maria no miova tsy ho amin'ny lehilahy tsotra amin'ny asa masina nanirahana, mba ho an'ny mpanjakavavin'ny lanitra, sy ny anarana hafa.
Izany avy amin'ny fivavahana fa ny fomban-drazana Maria sy ankizy tsangambato efa aelin'ny an Eglizy Katolika.
Izany no fomban-drazana izay nipoitra nandritra ny taonjato maro ao amin'ny Eglizy Katolika. Noho izany, dia tsy misy fahefana ho an'ny olombelona izany fomban-drazana. Ny finoana kristianina dia mifototra amin'ny fahefan'ny Soratra Masina sy ny fampianaran'ny apostoly, ary izay manazava ny fisandratana Maria araka ny tsy maha-. Noho izany, dia afaka manafaka antsika amin'ny amim-pahasahiana ny fampianarana momba an'i Maria.
Nanomboka ny Eglizy Katolika tamin'ny fahadisoan-dàlana kely avy ao amin'ny Baiboly ny fampianarana ao amin'io faritra io. Izany dia ny mitarika ny rantsan-dalana, fa avy amin'ny tsipika mahitsy dia ho lavitra kokoa hiala amin'ny fiandohana, dia vao mainka fa ny tsipika dia voatsoaka. Toy izany koa ny tamin'ny ireo fampianarana tao amin'ny Maria ao amin'ny Eglizy Katolika.
Izany dia tsy voasoratra mba hanameloka Katolika tsirairay. Ianao mitombo ao izany fomban-drazana ao amin'ny Fiangonana Katolika, dia mora ny ho jamba ny mety amin'ity fotopampianarana. Zavatra voasoratra Hita ho fitaovana ho an'ny Katolika mba handrava ity hianatra sy hiaina mahasoa ny tari-dalana rehetra Jesosy, ilay iray izay mamonjy, ary dia toy izany no tokony hivavaka amin'Andriamanitra.
Izany dia miaraka amin'ny alahelo fa mariho fa ny Fiangonana Katolika dia fiangonana amin'ny fampianarana tsy araka ny Baiboly maro, ny iray amin'ireo dia ny Fivavahana Tamin'i Maria. Raha ny marina, amin'ny lafiny maro, Mary avo kokoa noho ny zanany, Jesosy, hoy ity ny zava-drehetra mikasika ny fomba ratsy dia afaka mahazo.
Tsy fotsiny ny ho ekiomenika handefitra sy hadio tsara fanahy aoka izany ny fomba antoka ny zavatra resahin'ny Maria nandika. Manana fahalalahana miteny sy fa afaka ampiasaina mba hanampiana ny Katolika mba hiala amin'ny fampianarana mahasoa momba an'i Maria.
Ny zavatra eto efa nanoratra mikasika ny Fiangonana Katolika dia mazava ho azy fa tokony hanao izany. Ny zava-misy fa ny Eglizy Katolika sy ny fampianarany noheverina ho hita mazava. Dia Mazava ho azy fa any an-tsekoly noho ny tokony ho zato taona lasa izay izay tafiditra ao am-pianarana ny fanabeazana ny ankizy. Mainka isika no tsy tokony ao amin'ireo fiangonana ho rafitra mazava momba ny zavatra Eglizy Katolika mijoro ho, raha avy eo amin'ny boky panjakana nahatsapa fa ho ampahany amin'ny fanabeazana any an-tsekoly.
Raha ity lahatsoratra ity dia mitsikera ny Fiangonana Katolika, dia iray ihany ny marina. Raha ny marina, ny tsikera dia tena malemy fanahy raha oharina amin'izay olona 'Andriamanitra efa hatramin'izay. Tsy ny rehetra no mahafantatra fa lehibe izany anarana toy ny Wyckliff, Huss, Luther, Calvin, Melanchthon, Knox, Tyndale, John sy Charles Wesley nahatsapa fa ny papa dia ilay mpivaro-tena lehibe araka ny voafaritra ao amin'ny Apokalypsy, hamaky ny toko faha-17 dia miresaka momba izany amin'Andriamanitra ny fitsarana ny vehivavy janga.
Maro tamin'ireo fiangonana Protestanta izany ihany koa tafiditra ao amin'ny fitanisan-keloka. Inona no hanampy antsika ankehitriny hamela izany? Ahoana no ahafahantsika mandeha amin'ny fifanarahana miaraka amin'ny Katolika noho ny hetsika iraisam-pinoana malalaka izay nofidiko? Fotoana izao ho antsika ao amin'ny andro farany efitra ô, fantaro ny mazava ny alohany ary koa nanana tonga saina ny marimaritra iraisana.
Mila mankatò an'Andriamanitra sy ny Teniny mihoatra noho ny hangina sy hanaiky ity fiangonana ity sy ny fampianarana tsy araka ny Baiboly. Inona koa no azo lazaina isika mino ny tenin'Andriamanitra, ary mieritreritra fa ity fiangonana ity ihany ny iray amin'ireo fiangonana hafa rehetra?
V 03, tisdag 19 januari 2021 kl 18:08